सविधान दिवसको पूर्ब सन्धामा ! - Muldhar Post
सविधान दिवसको पूर्ब सन्धामा !
मूलधारपोष्ट २०७६, २ आश्विन बिहीबार 243 पटक हेरिएको
बाजुरा -जिल्लाका नौ वटै स्थानीय तहले संविधान दिवस हर्षोल्लासका साथ मनाउने तयारी गरेका छन् । स्थानीय तहले मुलुकमा संविधान जारी भएको खुशीयालीमा असोज ३ र ४ गते तीन दिनसम्म दिवस मनाउने तयारी गरेको हो । तीन दिनसम्म विविध कार्यक्रम गरेर संविधान दिवस र राष्ट्रिय दिवस मनाइन गौमुल गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरि बहादुर रोकायाले बताउनुभएको छ ।
बिहिवार गाउँपालिकाका कार्यालयमा राष्ट्रिय झण्डा, ब्यानर राख्ने, सरसफाइ गरेको तथा कर्मचारीका बीचमा ब्याण्डम्यान्टन प्रतियोगिता सञ्चालन गरेको छ । असोज चार गते वृक्षारोपण गर्ने र गाउँपालिकाका केन्द्र घट्मुनामा दिपावली गरिने बताईएको छ । साथै ६ वटै वडामा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउन गाउँपालिकाले निर्देशन दिएको छ ।
सविधान दिवसको अवसरमा सरसफाई,
संविधान दिवसको पुर्व सन्ध्यामा बजार सरसफाई गरिएको छ । दिवसको अवसरमा बडीमालिका नगरपालिकाले सरसफाई गरेको हो । जिल्लाको सदरमुकाम मार्तडी बजारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि तुफान डाडाँ सम्म सरसफाई गरेको हो । बजार वरीपरी रहेको फोरमैला आज संविधान दिवसको पुर्व सन्ध्यामा एक कार्यक्रमका विच सरसफाई गरेको बताइएको छ । सरसफाई कार्यक्रममा जनप्रतिनिधी, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा स्थानीयको सहभागिता रहेको थियो ।
संविधान दिवस २०७६ को पुर्वसन्ध्यामा आज गौमुल गाउँपालिका ५ मा वृक्षारोपण गरिएको छ । रोपिएको विरुवा हुर्किय जसरी देशमा परिवर्तन होस् भन्ने उद्देश्यका साथ वृक्षारोपण गरिएको वडाअध्यक्ष गणेश रोकायाले बताउनु भएको छ । स्थानिय वनमा संकलन गरिएका उत्तिस, लालिगुराँस, पागर, बाँज र दल्लो लगायतका करिब २ सय विरुवा रोपिएका छन् । विरुवा सिहँ सामुदयिक वनमा रोपिएका हुन् । जनप्रतिनिध, स्वास्थ्यकर्मी र जनसमुदायले आज विहानै विरुवा संकलन गरेर दिउसो रोपिएको वडाअध्यक्ष रोकायाले जानकारी दिनुभएको छ । साथै जिल्ला स्थित सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयहरुले अहिले साँझ दिप प्रज्वलन गरेर संविधान दिवसको स्वागत् गरेका छन् ।